काठमाण्डौं Archives - Pardeshi Khabar
lama vai video अन्तर्राष्ट्रिय कतार कलाकार कविता काठमाडौं काठमाण्डौं कार्यक्रम किराँत याक्थुङ चुम्लुङ कुवेत खाडी रोजगार खेलकुद गजल दुबई नेपाल नेपाली राजनीति परदेशी खबर प्रवास बिश्लेषण भारत भिडियो मनोरञ्जन मलेसिया मुक्तक युएई युवक राई ठिमुर राजनीति राष्ट्रिय राष्ट्रिय समाचार रुपेन हमाल रोजगार लुम्बिनी समाज नेपाल कुवेत लेख विजनेस समाज सहयोग साँस्कृतिक कार्यक्रम साईप्रस साउदी अरब साहित्य साहित्य पर्देशी खबरमा सिमा कार्की सुरज बिक निर्दोष स्वास्थ्य
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: May 24, 2021
पहिलो शताव्दिवीच रोमका क्रुर शासक आफ्नै देश रोम जलिरहदा वाँसुरी बजाइरहेका थिए । भनिन्छ, वच्पनको प्रेमपिडाबाट विक्षिप्त बनेका सन्की र रोमका क्रुर राजा आफ्नो कुण्ठा र अधुरो प्रेमप्यास मेट्न अरुको पिडाबाट आनन्द लिन्थे रे ! वर्तमान नेपालको शासकको सन्की र अलोकपृय हरकतले आम नेपालीलाई निरोको त्यो प्रतिविम्व नरुचाउँदा नरुचाउँदै पनि वार वार सम्झाइरहेछ । अहिलेको सञ्चारका विविध माध्यमहरुबाट क्षण—प्रतिक्षण सम्प्रेषण भैरहेका प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रपतिका काम कार्यवाहीका सम्बन्धमा आलोचना र प्रत्यालोचनाका शव्दावलीबाट किञ्चित पनि उहाँहरुलाई छोएको आभाष हुन्न । लाग्छ, हरेक दुर्नाम—वाच्यहरु सहन सक्ने उहाँहरुसंग गैडाको खाकभन्दा बाक्लो असंवेदनाका कवचहरु छन्फुर्सदमा
काठमाण्डौं, डा. विष्णु आभूषण, बिश्लेषण ताजा खबर, नेपाली खबर, प्रमुख समाचार, फोटो ग्यालरी, राजनीति, विचार विश्लेषण No Comments »
५ देशबाट आएका पाहुनाले गरे इन्द्रजात्रा अवलोकन
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: September 13, 2019
भदौ २७, काठमाडौं । काठमाडौंको परम्परागत पर्व इन्द्रजात्रामा पहिलोपटक विदेशी पाहुनाहरु सहभागी भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको निम्तोमा आएका ५ देशका पाहुनाले इन्द्रजात्रा अवलोकन गरेका हुन् । उनीहरुले शुक्रबार पदयात्रा गरी काठमाडौंको पुरानो भित्री शहरका विभिन्न स्थानहरू भ्रमणसमेत गरे । पदयात्रा अघि उनीहरूलाई हनुमानढोका दरवार क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए । अवलोकन भ्रमणमा चीनको लान्जाउ सिटीका मेयर जियाङ सियावहोङ, भूटानको थिम्पू नगरका मेयर किन्ले दोर्जीलगायत चीन, भारत, अमेरिका, भूटान र जापानका दश शहरबाट नेपाल आएका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए । भारतको नर्थ दिल्ली नगरपालिकाकाफुर्सदमा
काठमाण्डौं ताजा खबर, नेपाली खबर, पर्व, बिशेष समाचार No Comments »
विश्वकप छनोट अन्तर्गत नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच क्यानबेरामा खेल हुने
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: August 2, 2019
काठमान्डौ/ १७, साउन । सन् २०२२ मा हुने कतारमा फिफा विश्वकप फुटबल र सन् २०२३ मा चीनमा हुने एएफसी एसियन कपको छनोट प्रतियोगिताको समूह ‘बी’ मा रहेको नेपालले अस्ट्रेलियासँगको अवे खेल क्यानबेरामा खेल्ने भएको छ। अस्ट्रेलिया फुटबलले शुक्रबार जनाएअनुसार नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच जिआइओ रंगशालामा खेल हुनेछ। असोज २३ (अक्टोबर १०) हुने खेल त्यहाँको समयअनुसार दिउँसो १ बजे सुरु हुनेछ। विश्वकप छनोटमा नेपालको यो तेस्रो अवे खेल हुनेछ। त्यसअघि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले भदौ १९ कुवेत र भदौ २४ गते चाइनिज ताइपेईसँग अवे खेल खेल्न तयारी गरिरहेको छ। दशरथफुर्सदमा
काठमाण्डौं, नेपाल र अस्ट्रेलिया, विश्वकप छनोट अन्तर्गत खेलकुद, ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी No Comments »
१२ वर्षमा बिहे, १३ मा आमा
जनकपुरधाम, १७ साउन । चन्दनिया देवी सदा १६ वर्षकी भइन्। उनको विवाह तीन वर्षअघि भएको थियो। अहिले काखमा छोरो छ भने गर्भमा अर्को बच्चा । अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ । शारीरिक रूपमा कमजोर देखिएकी चन्दनियालाई ढेडवर्षे छोरो सम्हाल्न गाह्रो छ। गर्भको बच्चा सात महिना पुगिसकेको छ। चन्दनियालाई परिवार नियोजनका साधनबारे जानकारी छैन। यसबारे सोध्दा उनी लजाउँछिन् मात्र। महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका-१० मधवा टोलका मुसहरी बस्तीमा अधिकांश छोरीको बिहे १० देखि १२ वर्षकै उमेरमा हुन्छ। बिहे भएको एकदुई वर्षमै आमा बनेपछि उनीहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छन्। सन्तान पनिफुर्सदमा
काठमाण्डौं, समाज ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
मंसिरमा १४ उपनिर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णय
काठमाडौं, १७ साउन । सरकारले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त ५० स्थानका लागि आगामी १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेकाेछ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त पदमा आगामी १४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि बिहीबार मध्यान्ह निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ५० स्थानमा १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगको सो सुझावअनुसार नै सरकारले १४ मंसिरका लागि मिति तोकेको हो । बिहीबार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका रफुर्सदमा
काठमाण्डौं, राजनीति, राष्ट्रिय, राष्ट्रिय समाचार ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी, राजनीति, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
टि-२० विश्वकप छनोटको खेलमा नेपालको शानदार जित, कुवेत ७ विकेटले पराजित
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: July 27, 2019
साउन ११, काठमाडौं । पारस खड्काको कप्तानी पारीसँगै नेपालले टी-२० विश्वकप छनोटको खेलमा कुवेतलाई ७ विकेटले हराएको छ । शनिबार बिहानको शानदार जितसँगै नेपालले ग्लोबल छनोटको सम्भावना कायमै राखेको छ । अब नेपालले सिंगापुरविरुद्धको खेलमा पनि जित निकाल्नुपर्छ । इन्डियन एसोसियसन क्रिकेट मैदानमा कुवेतले नेपाललाई १४२ रनको लक्ष्य दिएको थियो । सो लक्ष्य नेपालले १५ ओभर ५ बलमा ३ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो । कप्तान पारस खड्काले ६८ रनको शानदार पारी खेले । ४२ बल सामना गरेका उनले ११ चौका र १ छक्काको सहयोगमा ६८ रन योगदान गरे । यसैगरीफुर्सदमा
काठमाण्डौं खेलकुद, ताजा खबर, नेपाली खबर, बिशेष समाचार No Comments »
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सोमबारबाट दैनिक १० घण्टा बन्द हुने
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: March 30, 2019
१६ चैत २०७५ / काठमाडौं l त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल धावनमार्ग मर्मतको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सोमबारबाट सुरु हुने मर्मतको कामका लागि निर्माण सामाग्री संकलनको काम तिब्र रुपमा भइरहेको छ। विमास्थलको धावनमार्ग मर्मतअघि ठेकेदारले ७० प्रतिशत निर्माण सामाग्री संकलन गरिसक्नुपर्ने छ। सोही अनुसार काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले बताएको छ। विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना नेशनल एरोटेक्नोलोजी इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनलाई दिइएको छ। धावनमार्ग ममर्तका क्रममा दैनिक १० घण्टा विमानस्थल ठप्प हुनेछ। राति १० बजेदेखि आठ बजेसम्मका सबै उडान दिउँसो सारिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। मर्तमत कार्य ९० दिनभित्र सक्नु पर्नेछ।फुर्सदमा
काठमाण्डौं ताजा खबर, नेपाली खबर, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरण: प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्मको दृश्य
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: May 14, 2018
अदालतबाट हुने आदेशको पर्खाइमा अभियुक्तका आफन्तको बास नातागोता, होटल तथा धर्मशालामा वैशाख ३१,विराटनगर l सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा हाल हिरासतमा रहेका ३० प्रतिवादीलाई दिनहुँ प्रहरी कार्यालयबाट अदालतसम्म ओहोरदोहोर गराउँदासम्मको यात्रा रोमाञ्चक छ । मुद्दामा मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनुवा कक्षमा जवानदेखि डीआईजी तहसम्मका ८ प्रहरी छन् । विराटनगरस्थित उक्त प्रहरी कार्यालयमा बिहान खाना खुवाएपछि अदालती बहसमा उपस्थित गराउन हतकडी लगाइन्छ । अदालत परिसरमा उनीहरूको हतकडी भने खोलिन्छ । परिसरमा उपस्थित परिवारजनको अनुहार हेर्दै उनीहरू अदालतको माथिल्लो तल्ला उक्लन्छन् । कडा सुरक्षा घेराबीच उनीहरू ३ नम्बर इजलासका न्यायाधीश नारायणप्रसादशर्मासमक्ष जारी बहस सुन्छन् । इजलासकोफुर्सदमा
काठमाण्डौं, नेपाल ताजा खबर, नेपाली खबर, बिशेष समाचार, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
चक्रपथमा मोनोरेल बनाउन चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: April 28, 2018
वैशाख १५, काठमाडौँ l चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल (सडकमाथि गुड्ने रेल) निर्माण गर्न प्रस्ताव पेस गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा दुई वर्षभित्र मोनोरेल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी महानगरपालिकाको सार्वजनिक–निजी साझेदारी इकाईका प्रमुख महेश काफ्लेले दिए । ‘चक्रपथको २७.२ किलोमिटर सडकमा दुई वर्षभित्र मोनोरेल गुडाउने योजनासहित सीआरसीसीले पेस गरेको प्रस्तावमाथि महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायत पदाधिकारीले छलफल गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने । चिनियाँ कम्पनीले पहिलो चरणमा प्रस्तावमा मोनोरेल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्तावमा गरेको छ । अध्ययन सकिएपछि कम्पनीले निर्माण थाल्ने प्रस्तावसमेत गरेको छफुर्सदमा
काठमाण्डौं ताजा खबर, नेपाली खबर, बिशेष समाचार No Comments »
त्रिभुवन विमानस्थल अब २१ घण्टा
Post by: Naina Rai प्रकाशीत मिति: April 26, 2018
वैशाख १३, काठमाडौँ l त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जेठ ७ देखि २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अहिले बिहान ६ बजेदेखि राति साढे १२ बजेसम्म साढे १८ घण्टा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको छ । विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षत्रीले बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयमा आयोजित सयदिने कार्यक्रम समीक्षामा २१ घण्टा उडान सञ्चालन गर्न चाहिने एटीसीलगायत जनशक्ति व्यवस्थापन भइसकेको बताए । हवाई ट्राफिक चापका कारण परेको समस्यालाई न्य्ूनीकरण गर्न एक महिनाअघि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सयदिने कार्यक्रममार्फत निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पहिलोपटक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । ‘यसअघि विमानस्थल साढेफुर्सदमा
काठमाण्डौं ताजा खबर, नेपाली खबर, बिशेष समाचार, राष्ट्रिय समाचार No Comments »
गधाको दूधको पनिर सबैभन्दा महँगो !
अवैध रुपमा नेपाल छिरेका ११ जना अफगान नागरिक पक्राउ
असोज २० मा मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने
भुटान र चीन बीच सीमा विवाद अन्त्य गर्ने रोडम्यापमा हस्ताक्षर, भारतको ‘नोटिस’
आम चुनावका लागि जापानमा प्रतिनिधि सभा विघटन
जापानको आगामी प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिडा बन्ने निश्चित
कोरोनाको उत्पत्तिबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुसन्धान गर्ने
नमस्ते रेष्टुरेन्ट खेलकुदको आयोजना तथा BEC र सिटि एक्सप्रेस भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि KSAB अवासियालाई
सुनुवार सेवा समाज कुवेतको अध्यक्षमा लाल बहादुर सुनुवारलाइ चयन गर्दै सम्मेलन सम्पन्न
मितेरी समाज युएई द्वारा बाढी पिडित लाई सहयोग
सुनुवार सेवा समाज कुवेतको साधारण सभा तथा शाखा सम्मेलन हुँदै
एमालेको ८८ पृष्ठ लामो विधान (पूर्णपाठसहित)
एनआरएनएको १० औं विश्व सम्मेलन र निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय
एमाले सांसदका अवरोधका बीच वार्षिक प्रतिवेदन पेश,बैठक ८ मिनेट
मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिए सँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश एमाले फुटाउन आएको पुष्टि भयो -ओली